Ukwelashwa Komlomo Okusha Okusha kwe-COVID-19 Okutholwe yi-Canada
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izindaba Zocingo » Ukwelashwa Komlomo Okusha Okusha kwe-COVID-19 Okutholwe yi-Canada
Namuhla, uMhlonishwa uFilomena Tassi, uNgqongqoshe Wezinsizakalo Zikahulumeni Nokuthengwa Kwempahla, umemezele ukuthi uHulumeni waseCanada uthole ukuthunyelwa kokuqala kwezifundo zokwelashwa ezingama-30,400 zePfizer's COVID-19 oral antiviral treatment, PAXLOVID TM, kanti ezinye eziyi-120,000 okulindeleke ukuthi zilethwe phakathi kwamanje ekupheleni kukaMashi. Ukwelashwa kutholwe ukugunyazwa ngokomthetho kwe-Health Canada ekuqaleni kwanamuhla.
Uhulumeni wase-Canada uzibophezele ekuvikeleni impilo nokuphepha kwawo wonke umuntu e-Canada ku-COVID 19. Lokhu kufaka phakathi ukuthola ukwelashwa okuphephile nokusebenzayo njengoba kutholakala.
Ukugoma kanye nezinyathelo zempilo yomphakathi kusalokhu kuyindlela engcono kakhulu yokuvikela umphakathi ekuthelelekeni nasezifweni ezinzima. Kodwa-ke, ukufinyelela ekwelashweni okusebenzayo, okusebenziseka kalula, njengalokhu okukhiqizwe yi-Pfizer, kungabaluleka ekwehliseni ubukhali be-COVID-19 kubantu abathelelekile.
Ukusatshalaliswa ezifundazweni nasezifundeni kuzoqala ngokushesha. Uhulumeni wase-Canada usebenzisana eduze nezifundazwe nezindawo ukuze axhumanise ukusatshalaliswa kwezifundo zokwelashwa ezweni lonke. I-Public Health Agency yase-Canada yahlangana nezikhulu zesifundazwe nezendawo ukuze kudingidwe ukuthunyelwa ngokusekelwe kumuntu ngamunye ngokulungiswa ngenxa yezidingo zokuthutha ezivela kwa-Pfizer.
I-Canada ithole izifundo zokwelashwa eziyisigidi. Amashejuli okulethwa ayaphothulwa, ngenhloso yokuletha izifundo zokwelashwa ezengeziwe e-Canada ngokushesha okukhulu.
Canada Covid Covid-19 Uhulumeni Impilo
Izindiza ze-New London ne-Bodrum zisuka e-Almaty nge-Air Astana
Manje sekuyicala kunoma iyiphi indiza yaseRussia ukungena e-UK...
I-Forage Seed Market Usayizi Ngabadlali Ababalulekile, Ukuncintisana...
I-Ireland iphakamisa zonke izidingo ze-visa kubantu base-Ukraine ...
Umnyango Wezwe: Bonke abantu baseMelika eRussia nase-Ukraine...
I-Alzheimer's Association iphoxekile ngesinqumo...
Uhlolo Olusha Olusha Lokuxilonga Igazi lwe-Bipolar...